Jona volan’ny fireharehana 2020: Manome voninahitra ny fifaharana sy ny faharetana ho an’ny vondrom-piarahamonina LGBTQI+ manerantany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jolay 2020 8:07 GMT
Iray amin'ireo mpivady LGBTQI+ voalohany nanambady tamin'ny fomba ofisialy tany Taiwan ny 24 Mey 2019. hoy ny soratra amin'ny fiteny Shinoa hoe “Vita mariazy izahay !” Saripikan'i Filip Noubel, nahazoana alalana.
Ho an'ny firenena maro manerantany, ny volana Jona no ankalazana ny Volan'ny Fireharehana ho fotoana hanomezam-boninahitra ny zo sy ny fahatsiarovana ho an'ny vondrom-piarahamonina LGBTQI+. Misy dikany manokana ny volana noho ny rotaka tany Stonewall tamin'ny Jona 1969 tany New York izay nanombohan'ny hetsika ho fanafahana LGBTQI+ tany Etazonia. Nambaran'ny ny filohan'i Etazonia Bill Clinton tamin'ny taona 1999 ho Volan'ny Fireharehana ho an'ny Pelaka sy ny Vehivavy Mifanambady ity volana ity ary nohitarin'ny filoham-pirenena amerikana Barack Obama tamin'ny 2009 ho an'ny vondrom-piarahamonina LGBTQI+ iray manontolo.
Saingy ankoatra ny toe-java-misy any Etazonia manokana dia fotoana ho an'ny mpikambana maro ao amin'ny vondrom-piarahamonina sy ireo mpikatroka ny zon'ny LGBTQI+ manokana, hiresahana ampahibemaso momba ny fiainan'izy ireo, hikarakarana hetsika, ary hiarovana ny fitoviana erantany ny volana Jona. Miovaova be ny toe-java-misy manerana izao tontolo izao: maro ny vahoaka LGBTQI+ no mijaly noho ny fanavakavahana, ny tenim-pankahalana ary ny fanafihana raha nitondra fitoviana ara-panambadiana tany Taiwan ny taona 2019 ary miatrika ny fanamelohana ho faty izy ireo any amin'ny firenena sasany.
Tamin'ity taona ity, nisy fiantraikany tamin'ny Volan'ny Fireharehana ny COVID-19 satria maro ny hetsika ho an'ny daholobe, ao anatin'izany ny fetibe sy ny Diabem-pireharehana, no tsy maintsy nofoanana na nahena betsaka noho ny fitandroana ara-pahasalamana. Manohy manasongadina ireo fanamby sy fandresena ho an'ny vondrom-piarahamonina LGBTQI+ manerana izao tontolo izao amin'ity pejy fitantarana manokana ity ny Global Voices.
Miarahaba ny lalàna vaovao momba ny fanambadian'ny samy lahy/vavy any Montenegro ny vondrom-piarahamonina LGBTI sy ny mpanao politika [mg]
Manery ireo Hongroà nanova fananahana hisafidy ny sesitany ny lalàna vaovao [fr]
Ny fomba nandrafetan'ny tanora Kazakhstan ny mari-panondroana nasionaliny [fr]
#SiAceptoCR: Manao fankalazana an-tserasera ny mpivady LGBTQ+ raha nankatoavina ny lalàna momba ny fanambadian'ny mitovy fananahana tany Costa Rica [fr]
Fantaro ilay mpikatroka Uzbek mampiasa fampiasa hampifandraisana ny pelaka mba hampahafantarana momba ny VIH sy ny fampitandremana [fr]
‘L Japan': Olon-droa miaraka mibilaogin-dahatsary ny fiainan'ny vehivavy mifanambady [mg]